“မြေနေရာမလိုဘဲ အိမ်မှာ အာလူးစိုက်ရင်း ဝင်ငွေရှာနည်း” – SainPwar
SainPwar > ဗဟုသုတများ > “မြေနေရာမလိုဘဲ အိမ်မှာ အာလူးစိုက်ရင်း ဝင်ငွေရှာနည်း”
“မြေနေရာမလိုဘဲ အိမ်မှာ အာလူးစိုက်ရင်း ဝင်ငွေရှာနည်း”
တော်ရုံလူက ပြောပြမှာ မဟုတ်တဲ့ အိမ်မှာနေရင်း ဝင်ငွေရှာလို့ရမယ့် နည်းလေးကို ပြောပြပါမယ်။
အာလူးကို ပုံးထဲ သို့မဟုတ် အိတ်ထဲထည့်စိုက်မည်ဆိုလျှင်
၂။ အာလူးကို အပင်ပေါက်အညှောက်လေးများ ထွက်လာသည်အထိ ထားထားပေးပါ။
ထွက်ရှိလာတဲ့ အပင်အညှောက်လေးတွေကို ဓားဖြင့်လှီးယူ၍စိုက်ပျိုးလို့ရသလိုအလုံးလိုက်ထည့်စိုက်လို့လည်း ရပါတယ်။ အိတ်ဖြင့်စိုက်မည်ဆိုပါက အိတ်အတွင်းထဲသို့မြေဆွေးမြေမွ သဲဆန်သောမြေကို တစ်ပေခန့်ထည့်၍ အာလူးကို အနည်းဆုံး (၂)ပင်(၄)အထိ့ ထည့်စိုက်ပါ။
၃။ ထည့်စိုက်ပြီးပါက အာလူးအပေါ်မှ နောက်ထပ်မြေဆွေး (၄)လက်မခန့် ဖုံးပေးထားပါ။
တစ်ခုသတိပြုရမှာကတော့တစ်အိတ်ထဲမှာအပင်ရေအများကြီးကိုထည့်မစိုက်ဖို့ပါ။အပင်ရေအများကြီးထည့်စိုက်မိလျှင် အပင်ကြပ်ပြီး ဥမဥနိုင်ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဥ ဥပါကလည်းမကြီးထွားပါ။အပင်ရေနည်းနိုင်သမျှနည်းလေကောင်းလေဖြစ်ပါတယ်။စတင်စိုက်ပျိုးသည်မှ ဥများဥသည့်အထိ အနည်းဆုံး အချိန် ၂လခန့်ကြာမြင့်တတ်ပါတယ်။
ဒီလိုပုံးထဲသို့မဟုတ် အိတ်ထဲအာလူးကိုထည့်စိုက်ခြင်းဟာအဟာရဓာတ်မြေသြဇာ အလေအလွင့်မရှိသလို ပေါင်းမြက်လည်း ကင်းစင်၍ ဥလည်းပိုမိုကြီးထွားစေပါတယ်။
ဓာတ်မြေသြဇာထည့်ပေးချင်ပါက တီစူပါ ပုလဲဓာတ်မြေသြဇာကို အနည်းငယ်ထည့်ပေးလို့ရပါတယ်။
Credit. Original writer
တစ်ခုသတိပြုရမှာကတော့တစ်အိတ်ထဲမှာအပင်ရေအများကြီးကိုထည့်မစိုက်ဖို့ပါ။အပင်ရေအများကြီးထည့်စိုက်မိလျှင် အပင်ကြပ်ပြီး ဥမဥနိုင်ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဥ ဥပါကလည်းမကြီးထွားပါ။အပင်ရေနည်းနိုင်သ
မျှနည်းလေကောင်းလေဖြစ်ပါတယ်။စတင်စိုက်ပျိုးသည်မှ ဥများဥသည့်အထိ အနည်းဆုံး အချိန် ၂လခန့်ကြာမြင့်တတ်ပါတယ်။
Previous Article ကလေးတဖက်နဲ့ မုန့်ဟင်းခါး ရောင်းနေတဲ့ ရည်းစားဟောင်းကို ရုတ်တရက် တွေ့လိုက်တဲ့အခါ….
Next Article ကျောင်းမတက်ရင် ခွေးဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ စကားကို ယုံစားမိလို့ နောင်တရခဲ့သူတဦး (တကယ့်ဖြစ်ရပ်မှန်ပါ)